Toro-lalana efatra mikasika ny Advocacy hita amin’ny teny Albaney · Global Voices teny Malagasy
Toro-lalana efatra mikasika ny Advocacy hita amin'ny teny Albaney
Voadika ny 27 Aogositra 2010 21:29 GMT
Faly izahay mampahafantatra ny fandikan-tenin'ireo toro-lalana efatra mikasika ny Global Voices Mpisolo vava amin'ny teny Albaniana. Niaraka tamin'ny fanampian'ny Metamorphosis Foundation, SEO Tips for Advocacy Bloggers, Geo-bombing: YouTube + Google Earth, Cross-posting for Advocacy, sy ny Blog for a Cause! dia efa afaka sintonina ao amin'ny aterineto.
Blog for a Cause!: dia manazava ny fomba ahafahan'reo mpitoraka blaogy mampiasa ireo blaogy ho isan'ireo fanentanana enti-manohitra ny tsy fahamarinana eran-tany. Ny fitorahana blaogy dia afaka manampy ireo mazoto an-tserasera amin'ny fomba maro. Fomba haingana sy mitsitsy hamoronana fisiana ao amin'ny aterineto, mba hanapariahana vaovao mikasikana tranga iray, sy hikarakarana fihetsiketsehina ho an'ireo mpanapa-kevitra any amin'ireo efitrano fiandrasana.
Geo-bombing dia iray amin'ireo teknika afaka ampiasaina mba hahazoana mampiely bebe kokoa ireo horonantsary fanentanana ao amin'ny YouTube avy amin'ireo rindram-baiko fanehoana saritany ao amin'ny Google tahaka ny Google Maps sy ny Google Earth. Ankehitriny ianao dia afaka mijery ireo horonantsarinao voamarika amin'ny saritany ao anatin'ny Google Earth sy ny Google Maps. Hipoitra avokoa ireo horonantsary voamarika ao amin'ny saritanin'ny YouTube.
Cross-posting ho an'ny Advocacy
Ity toro-lalana ity dia manome antsika fampidirana fohifohy ny amin'ny fampiasana ny cross-posting ho an'ny fanentanana fisoloana vava amin'ny aterineto. Mandinika ireo fitaovana 2.0 samy hafa ao amin'ny aterineto izy, mampiseho ireo ohatra tafita izay nampiasaina ny cross-posting ho an'ny fisoloana vava. Ahitana ireo vokatsoa sy voka-dratsin'ny teknikan'ny cross-posting ihany koa ity toro-lalana ity.
SEO Tips ho an'ireo mpitoraka blaogin'ny Advocacy
Ny tanjon'ny SEO Tips ho an'ireo mpitoraka blaogy ao amin'ny Advocacy dia ny ampahafantatra ny fanatsarana ny fitaovana fikarohana, ny lanjany sy ny fahafahan'ireo mpitoraka blaogy mampiasa azy mba hampitombo ny fivezivezeny sy famakiana azy ary handresy lahatra ny hevitr'ireo mpikaroka. Nosoratana tamin'ny fomba tena tsotra izany noho izany na ireo olona tsy teknisiana aza dia afaka mahita izany ho mora arahina sy hahazo tombo-tsoa avy amin'izany.
Iangaviana ianao hisintona ireo toro-lalana ireo ao amin'ny aterineto ary hanampy anay handika izany amin'ny teninao.
Raha mila fanazavana lalindalina kokoa dia iangaviana ianao hampilaza ny Lehiben'ny Global Voices Advocacy Sami Ben Gharbia ao amin'ny advocacy [ at ] globalvoicesonline [ dot ] org.
Tantaran'ny GV Mpisolovava farany
1 ora izayAzia Atsinanana